Suldaan Gar Yare: “Waxaan Ka Digayaa In Cadawgeena Asalka Ah Nalaka Sii Jeediyo oo Nalaku Mashquuliyo Xukaamta Carabta” (Dhageyso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Suldaan Gar Yare: “Waxaan Ka Digayaa In Cadawgeena Asalka Ah Nalaka Sii Jeediyo oo Nalaku Mashquuliyo Xukaamta Carabta” (Dhageyso)
Last updated Apr 25, 2018 197 0
Marka kowaad waxa uu is dul taagay, ogeysiis ay Turkida heysata Jasiira ku baahiyeen baraha bulshada islamarkaana ku dalbanayaan dad ay askareeyaan gaar ahaan leyli sarkaal, iyagoo sheegay in araajida loogu soo qori karo Ingiriisiga iyo afkooda Turkiga, meesha ka saaray afka hooyo ee Soomaaliga.
Sidoo kale wuxuu aqoonyahanku ka hadlay ol’ole ay Mareykanka iyo xulufadiisu ku tababarayaan ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo laga kala keenayo wadamo afrikaan ah laguna kulminayo dalka Nayjar. Wuxuu si gaar ah u falanqeeyay waxa keenay in Mareykanka uu ku bixiyo 6o milyan, Faransiiska 30 milyan Sucuudigana 100 Milyan.
Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay qodob baraarujin ah oo ku socda Soomaalida kaasoo ah in ay ka digtoonaadaan siyaasadaha dhagareysan ee lagu doonayo in laga sii jeediyo cadawgooda asalka ah laguna mashquuliyo dowlado carbeed oo la adeegsanayo kuwaasoo qaarkood ay dalkaba haatan isaga tageen.
Ummada Soomaaliyeed, ayuu ugu baaqay in aaney noqon kuwa laga sii jeediyo ama la hilmaansiiyo dowladaha dalkeena qabsaday sida: Itoobiya, Kenya, Uganda iyo kuwa lamidka ah.
HALKAN KA DEGSO WAREYSIGA AQOONYAHANKA